Burcad baddeed lagu wareejiyey Somaliland - BBC News Somali
Burcad baddeed lagu wareejiyey Somaliland
28 Maarso 2012
Image caption Burcad badeed Soomaali ah ayaa lagu wareejiyey Somaliland
Kooxdii ugu horreysey ee bucad baddeed ah ee lagu xukumo dalka Seychelles ayaa lagu wareejiyay Somaliland.
Halkaasi ayaa waxay ku gudan doonaan mudo u dhaxeysa 10 ilaa 24 sanno oo horey loogu xukumay.
Waxaa la filayaa in 10 qof oo kale oo burcad baddeed ah lagu soo wareejiyo Somaliland.
Arrintan ayaa waxay ka dambeysay heshiis Somaliland iyo Syschells ay saxiixdeen oo ku saabsanaa in Soomaliland lagu soo wareejiyo burcad badeedda soomalida ee iskood u doorbida in ay xukunkooda ku qaataan Somaliland.
Xafiiska QM ee la degaalanka dambiyada iyo mukhaadaraadka ayaa gacan ka gaystay wareejinta burcad baddeeda
Tallaabadani ayaa la filayaa in ay culayska ka yareyso waddamada Seychelles, Kenya iyo Mauritania, oo kamid ah wadamada la tacaalayay tirada badan ee burcad baddeeda ee ay soo xirayaan maraakiibta dagaalka ee caalamiga ah ee ku sugan badaha Somalia.